India-Madagasikara : hetsika toekarena hatao any Mumbai | NewsMada
Par Taratra sur 29/01/2016
Nankalazaina, ny 26 janoary teo, ny faha-66 taona ny fetim-pirenena indianina. Anisan’ny navoitran’ny ambasadaorony miasa eto amintsika, Sem. Chandra Ballabh Thapliyal, nandritra ny lanonana tetsy amin’ny Carlton Anosy, fa tsara ny fiaraha-miasa eo amin’ny tany roa tonta, hanohanana an’i Madagasikara amin’ny fampandrosoana.
Raha ny lafiny toekarena, nentaniny ny mpitondra, ny mpiasa birao, ny mpampiasa vola, ny mpandraharaha eto Madagasikara, hanatrika ny hetsika ara-toekarena “ny vita indianina” (made in India), hatao any Mumbai, ny 13-18 febroary ho avy izao. Fotoana hikarohana fiaraha-miombon’antoka amin’ny mpandraharaha indianina sy vahiny hafa firenena koa io, hampiasan’izy ireny ny volany aty Madagasikara. Azon’ireo liana atao ny manatona mivantana ny masoivohon’i India.
Azo atao tsara ny mampandroso ny angovo
Nosinganin’ny masoivohon’i India manokana koa ny sehatry ny angovo. Toy ny fiaraha-miasan’i India sy Frantsa, ny 30 novambra 2015 teo, hanatanterahana ny fandaharanasa Fiarahana iraisam-pirenena momba ny angovo, hanohanana ny firenena an-dalam-pandrosoana hisehatra bebe kokoa amin’ny angovo avy amin’ny masoandro.
Ankoatra ireo, maro ny tohana avy amin’i India eto Madagasikara amin’ny sehatra hafa. Ny lafiny teknolojian’ny informatika (NTics), ny fitsaboana, ny vatsim-pianarana ho an’ny Malagasy handranto fianarana any India, ny ara-kolontsaina, toy ny fampahalalana ny Yoga, ohatra, foto-pahalalana sy ara-kolontsaina indianina, ny fampahafantarana ny dihy indianina, sns.